आधुनिक मान्छेको कथा | मझेरी डट कम
kbs — Sat, 08/15/2009 - 15:48
यो कथासंग्रहको नामबाट यसभित्र रहेका कथा र तिनका विषयवस्तुबारे केही अनुमान गर्न सकिन्छ । 'नीलिमा' अर्थात् प्रेमको प्रतीक र 'गाढा अँध्यारो' अर्थात् प्रेमविरोधी अवस्था । अँध्यारोले जीवनको विरोध गर्छ, प्रेमको प्रतिपक्षमा बस्छ । अँध्यारोमा राम्रा काम हुँदैनन् । नकारात्मकता र विकृति अँध्यारोमा ज्यादा फस्टाउँछन् । संग्रह पढ्दै जाँदा उल्लिखित अनुमान सही सावित हुँदै जान्छ । कथाहरूमा जीवनका आशा, सम्भावना वा उज्याला पक्षहरू र संगति पराजित भएका छन्- निराशा, कुण्ठा, पाखण्ड, धोका, विसंगति र अँध्यारोको जित भएको छ । यसका अतिरिक्त कथाकार अनमोलमणिले कथाशिल्पमा उत्तरआधुनिकता र जादूमय यथार्थवादका छिटाहरू पनि पारेका छन् । नीलिमा र गाढा अँध्यारो कथासंग्रह सार्वजनिक भएको दुई दिनपछि अनमोलमणिले मलाई भनेका थिए- 'के मेरा कथाहरू नेपाली कथासाहित्यमा टिकाउ होलान् ? यसमा रहेका गुणभन्दा पनि कमजोरीका बारेमा जान्न उत्सुक छु ।' थोरै लेखकमात्रै आफ्नो कमजोरी बाहिर आओस् भन्ने चाहन्छन् । नीलिमा र गाढा अँध्यारोलाई पटकपटक पढेर मैले उनका कमजोरी खोज्ने प्रयास गरे । सामान्य वा झिनामसिना व्याकरणगत त्रुटि वा प्राविधिक गल्तीबाहेक अरू केही पाउन नसकेपछि मलाई कमजोरी खोज्नु पनि एउटा अर्को 'कमजोरी' झैं लागिरहेछ ।
पुस्तक पढिसकेपछि केही कथाले मलाई बेस्सरी रन्थनाएका छन् । विशेषतः पहिलो कथा 'टेस्टट्युब बेबी र मेरी प्रेमिका' र संग्रहको सबैभन्दा लामो कथा 'उस्तै' ले । र, तिनले केही प्रश्नहरू पनि मेरा मानसपटलमा जन्माइरहेछन्- के कुनै पनि लेखकले लेखेका सबै रचना अमर हुन्छन् ? समयको बहावसँगै तिनलाई पाठकहरूले बिर्संदैनन् ? एउटा लेखक बाँच्नका निम्ति कतिवटा उत्कृष्ट रचना लेख्नुपर्छ ? कुनै एउटा स्तरीय साहित्य सदाकालका निम्ति, सबै उमेर समूह, सबै वर्ग, जातजाति, शिक्षा वा चेतना भएका पाठकका लागि उत्तिकै पि्रय हुन्छ ? उल्लिखित सबै प्रश्नका जवाफ मसँग छैनन् र यस संग्रहका कथाहरूले पनि ती प्रश्नहरूको पूर्ण जवाफ दिन सक्दैनन् । तर अनमोलका एक दर्जन कथा संगृहित पुस्तक पढेपछि मलाई भन्न गाह्रो परेन- सबै रचना उही स्तरका र उसैगरी मन हल्लाउने शक्तियुक्त हुँदैनन् । यो तथ्य उसैगरी हरेक लेखकमा लागू हुन्छ । यद्यपि, एक सय आठ पृष्ठको यो कथासंग्रह पढ्न बसेपछि नटुंग्याई उठ्न कसैले पनि सक्नेछैन र एउटा लेखकको सबैभन्दा ठूलो क्षमता वा शक्ति भनेको त्यही नै हो । पहिलो कथा 'टेस्टट्युब बेबी र मेरी प्रेमिका' ज्यादा वर्णनात्मक छ । विज्ञानले आक्रान्त पुस्ताको कथा हो यो । यद्यपि, नेपाली समाज बनोटको पृष्ठभूमिलाई हेर्ने हो भने मुलुकको कुनै भेग सिटामोल र जीवनजल -नुन-चिनी-पानी) नपाएर आक्रान्त छ भने सोही नक्साभित्रको कुनै क्षेत्र विज्ञानको चरम उन्नतिले मन कुँडिएको पीडा पोखिरहेछ । यी दुवै क्षण एउटा चरम विसंगतियुक्त समयका चित्र हुन् । यो कथा मान्छेहरू मनहीन बन्दै गएको, क्रमशः जटिल बन्दै गएको मानवजीवन, आधुनिकताका नाममा चरम यान्त्रिक र कृत्रिम बन्दै गएको अवस्थाको सशक्त चित्र हो- प्रकृति र विज्ञानको द्वन्द्व पनि हो यो कथा । यो कथाले भन्छ- वर्तमान समयका मान्छेसित प्रेम छ- मुटु छैन, नाता छ- स्नेह र जिम्मेवारी छैन, जीवन छ- भावुकता छैन, सम्बन्ध छ- न्यानो छैन । पहिलो कथासँग यस संग्रहका अन्य कथाहरूले पनि कुनै न कुनै रूपमा सम्बन्ध राखेका छन् अथवा लगभग उस्तैउस्तै सेरोफेरोमा घुमेका छन् । हरेक कथाको अन्त्य पीडादायी छ । दोस्रो कथा 'पीडा-नायक' मान्छेभित्र व्याप्त अविश्वासको चित्र हो भने 'अनुत्तरित' ले परिचयहीन-नाताहीन वा टुहुरो सम्बन्धलाई उजागर गरेको छ । कहिल्यै बल्न नपाएको जिन्दगीको बाटोको हरियो बत्ती र पारी वा गन्तव्य छुन नपाएको हाम्रो समयको मान्छेको भोगाइ हो 'जेब्राक्रसमा उभिएर' कथा । मन असाध्यै पुलकित भएका बखत साटिएका प्रेमका चिनु हराउनु, शरीर छल्लिनु, जीवनको उत्तरार्द्धसम्म पनि नपाउनु वा पाए पनि अर्कै थोक भएर आउनुको दुःख हो 'नीलो रूमाल हराएपछि' कथा ।
सापटी टाउको अर्थात् परिचय लिएर अर्थहीन बाँच्न विवश मान्छे प्रस्तुत भएको छ 'बाँकी प्रश्नहरू' मा । वर्तमान समयको सबैभन्दा दर्दनाक कथा बोकेको छ संग्रहको लामो कथा 'उस्तै' ले । कसैसँग पनि नजोडिएको आफ्नो छुट्टै परिचय खोज्न हिँडेका नोराहरू कतै हराएका छन् र पर्याप्त खराब कार्य नगरेकोमा एक पात्रले आलोचित हुनुपरेको छ । प्रेमिकाका नाममा कविता लेख्ने पदम एक्लिएको छ- संग्रहको शीर्षक कथा 'नीलिमा र गाढा अँध्यारो' मा । फूल, संगीत, सुन्दरता, केटाकेटी, पुस्तक मन नपर्ने नाममात्रको मान्छेको कथा हो 'सहर-यात्रा' । अब प्रेम गर्न वा बिहा गर्न मध्यस्थकर्ताको काम कम्प्युटरले गरिदिन्छ- कम्प्युटरले नै मान्छेभित्रको प्रेमको मात्रा जाँचिदिन्छ र नम्बर दिन्छ वा पास-फेल भनिदिन्छ । तर कालान्तरमा त्यसको नतिजा भोग्न कुनै एउटा मनयुक्त मान्छे नै बाध्य हुन्छ- 'यथावत्' कथाभित्रको कथा यस्तो छ । एघारौं कथा 'अकारण' ले उतारेको आँसुका घाउहरू एउटा वियोगान्त कविताजस्तो छ । संग्रहको अन्तिम कथा 'कार्नेसन, धूवाँ र तिम्रो झझल्को' एउटा निजात्मक निबन्ध बन्न पुगेको छ । यसमा कथातत्त्वभन्दा निबन्ध तत्त्व बढी हावी हुन पुगेको छ । निबन्धजस्तै भए पनि यो कथाले पनि अँध्यारोकै बयान गरेको छ ।
उल्लिखित नमीठा विशेषणहरूले दुनियाँभरका मान्छेहरू क्रमशः मेसिनमा परिणत हुँदै गएका, जीवनशैलीभित्र पाखण्ड र अस्वाभाविकताले प्रश्रय पाएको, प्रेमहरू बिकाउ वस्तुमा परिणत भएको र भत्किएका आस्थाहरू, संस्कृतिभञ्जनको चरम अवस्थाले समाज विकृत बनाएको प्रमाण दिएको छ । वास्तवमा अनमोल स्वयम्मा एउटा कथा हो- यथार्थ कथा । कथापूर्व रहेको 'आफ्नै कथा' को ४४ हरफसम्म अनमोलले आफ्नो कथालाई निर्वस्त्र उतारेका छन् । त्यसपछिका हरफहरू औपचारिक । त्यही ४४ हरफ नै अनमोल हो- उनी उभिएको जमिन हो, ती हरफहरू अहिले अपूर्ण छन्, तिनलाई नढाँटी लेख्दा अनमोलले आफ्नो जमिनको कथा, परिवेश र भोगाइको कथा लेखेको हुनेछ र कालान्तरमा त्यो कथा हामी सबैको आफ्नो कथा हुनेछ- नेपाली कथा साहित्यको अमर कथा हुनेछ ।
यो संग्रहमा पाठकले विभिन्न स्वादका कथा पाउँदैनन् । कुनै पनि एउटै पुस्तकमार्फत विविध स्वादका कथा दिनसकेमा विभिन्न खालका पाठक आकषिर्त हुन्छन् । यसबारे अनमोल सचेत हुनैपर्छ ।
Kamal Kuikle (not verified) — Wed, 05/11/2011 - 13:37
I like Nepali Kabita and katha also, but i can't found any good webside to read and publish my poem . because i am also write poem.
Kavra, Khanal thok-5, simdada